I-TAMBOAMIGO - (Ukhuseleko, Ubuhlobo kunye Nokuthembana) - I-Airbnb
I-TAMBOAMIGO - (Ukhuseleko, Ubuhlobo kunye Nokuthembana)
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguHumberto
Iflethi encinci elungele abantu abathanda ukuzola nokuziqhelanisa nobomi bemihla ngemihla. Xa ikhitshi likhona, banokulungiselela ukutya kwemihla ngemihla ngokulula nangokukhawuleza. Sisekufutshane neevenkile kunye neebhanki. Imarike ikufuphi, apho unokufumana nayiphi na imveliso ngamaxabiso afikelelekayo. Asinayo i-A/C, kodwa kukho iifeni zesilingi kumagumbi. Siza kusoloko sinikela ingqalelo kwaye sikulungele ukukunceda ngayo nantoni na oyifunayo. Jonga.
KUBALULEKILE: Uqeshisa ngeflethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomplex elawulwa ngabantu, nangona benamava okunceda abakhenkethi nokufumana abantu abasuka ehlabathini lonke, THINA ASIVELI EHOTELE; kungcono silawulwe yintsapho apho senza konke okusemandleni ethu ukuba sinikezele ngenkonzo esemgangathweni ngexabiso elifikelelekayo kumntu wonke nangenjongo yokwenene yokuba uzive ukhululekile kwaye uzolile ngexesha lokuhlala kwakho.
Iintsuku eziyi-7 e Tarapoto
Ikwindawo yoshishino yaseTarapoto, ekufutshane nemarike apho unokuthenga khona izinto zokucoca okanye izinto zokutya kwasemini ngosuku ngamaxabiso alula.
Umbuki zindwendwe ngu- Humberto
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tarapoto